Tanora · Marsa, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Marsa, 2010
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Marsa, 2010
Amerika Avaratra06 Marsa 2010
Maraoka : Ka ny bolongan'iza ary no BOMB e?
Maraoka05 Marsa 2010
Ny fifaninanana Best Of Morocco Blog,[Bolongana Maraokana Tsara indrindra] na ny BOMBies, no fifaninanana famahanam-bolongana fanao isan-taona farany indrindra. Mifantoka amina bolongana miteny anglisy izy ity. Nikatona tamin'ny 21 febroary 2010 ny fifidianana izay hofantenana tao anaty sokajy dimy samihafa. Nanambara ny lisitra fenon'ny voafantina sy ny nandresy ny MoroccoBlogs.com...
Bolgaria02 Marsa 2010